﻿	Mfe Rice Pilaf - Ezi Ntụziaka
Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
banana pudding achicha uzommeputa na facebook
foto nke achicha Easter na achicha
ọle g'ọ tọ dụdu akpụru ọkpoma
ebee ka m ga-ahụ iberibe nri
© Copyright ©2021 All rights reserved magnaetesweb.com | AmụMa Nzuzo
Mfe Rice Pilaf
Osikapa Pilaf bụ ọmarịcha nri iji nweta akwụkwọ nri gị. Ọ bụ ihe dị ụtọ nke otu ite nri dị ụtọ nke nwere osikapa na ifesa of veggies esiri ofe. The zuru okè akụkụ nri Ezi Tenderloin !
kukumba na yabasị salad na utoojoo ude na Mayonezi
E nwere ike ịbụ ọtụtụ narị ụzọ esi eme pilaf osikapa, ebe ọ bụ na efere a masịrị n’ụwa niile ma nwee ọtụtụ ọdịiche agbụrụ. O doro anya na ọ bụ nzọụkwụ si osikapa !
Gịnị bụ Rice Pilaf
Rizị Pilaf bụ osikapa esiri esi ọkụkọ efere , mmanya ma ọ bụ mmiri mmiri ọzọ na-abụghị naanị mmiri. A na-etinyekwa ahịhịa ndụ, akwụkwọ nri na anụ esi n’ime ite ahụ na osikapa ka ọ na-esi nri. Ọtụtụ mgbe, a na-akwadebe ya na mmiri n’elu ite, ma ị nwekwara ike ịme pilaf osikapa achicha site n’itinye ya n’ime efere ekpuchighị ekpuchi ma sie ya n’ime oven.
Osikapa maka Ime Pilaf
Ntụziaka a chọrọ basmati osikapa , nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nzuzu, na-esi ísì ụtọ na osikapa na-atọ ụtọ, nhọrọ zuru oke maka osikapa pilaf. You nwere ike iji osikapa ọka dị ogologo ọ bụla na uzommeputa a (ị nwere ike ịgbanwe oke mmiri mmiri).
Richaa osikapa: Ọ bụrụ na ị na-eji osikapa ọka dị ogologo, mara na ọ nwere akwa dị larịị nke a ga-asacha. Itucha ya ugboro ugboro na mmiri oyi ruo mgbe mmiri na-agba fọrọ nke nta ka o doo anya na igbapu nke ọma. Basmati kwesiri ka asacha ya ma kpochapu ya nke oma, mana ekwesighi ka asacha ya dika osikapa ocha.
Were osikapa: Maka osikapa pilaf, ichoro nkpuru osikapa nke na adighi nma. Sauteeing na osikapa na mmanụ na-egbochi ya ịrapara ma n'ezie na-agbakwunye nnukwu ekpomeekpo.
Otu esi eme osikapa Pilaf
Ga-ejikwa obere mmiri karịa ọtụtụ ụzọ osikapa na-akpọ. Ọtụtụ mgbe, Ezi ntụziaka dị n’azụ akpa ahụ kwadoro akụkụ abụọ mmiri ka ọ bụrụ otu osikapa. Maka pilaf, ị kwesịrị iji obere mmiri mmiri maka iko ọ bụla osikapa, dịka egosiri na nhazi. Nke a nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnọdụ nri gị. Nye osikapa naanị otu ngwa ngwa mgbe ị wetara ya na simmer. Esi nri ya kpuchie, na obere okpomọkụ.
Nke a bụ otu esi eme pilaf osikapa dị mfe:
Gwakọta yabasị, galik na bọta n'ime ite ma gbanye ya ruo mgbe ọ ga-adị nro.
Tinye osikapa saa na drained ma bido ruo mgbe ọ malitere ịgbanye ọlaedo (onyinyo dị n'elu), ma ọ bụ gbanwee translucent.
Tinye mmiri mmiri na veggies, nye osikapa otu ngwa ngwa, wee kpuchie ya ma gbanye ya, ruo mgbe mmiri mmiri niile na-abanye
Top na almọnd na pasili ma ọ bụrụ na-eji ma na-efu na ndụdụ.
Aka ekpe Rice Pilaf
Refrigerate: A na-eri pilaf osikapa na-ekpo ọkụ ma dị ọhụrụ site na stovu ma ọ na-etinye na friji ụbọchị 2-3.
Ifriizi: Jide n'aka na ọ zuru oke oyi tupu oyi. Ọ kwesịrị idobe ọnwa 2-3 na friza, ọ kachasị mma ịmegharị na ngwa ndakwa nri (M na-agbakwunye mmiri tii tii ole na ole mgbe ọ na-emegharị).
Ozugbo ị matara otu esi esi nri isi pilaf osikapa ebe a, gaa n'ihu ma mepụta ụdị nke gị! Tinye peas, mịrị, ngwa nri na oge. Jiri osikapa ma obu veggies di iche. Rice pilaf bụ nri dịgasị iche iche enwere ike idozi iji kwekọọ na ụtọ ezinụlọ gị!
Ntụziaka ndị ọzọ ’ll ga-ahụ n'anya
Osikapa Mexico - zuru oke maka abalị taco
Ofe Osikapa - ezigbo ike
Osikapa Butteri - nwa m nwanyị ọkacha mmasị
Ero ọka bali Risotto - mfe ma fancy!
Osikapa Spanish - a ụtọ n'akụkụ
Unyi Osika - a Southern kpochapụwo
5site na7votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri35 Nkeji Oge zuru ezuAnọ Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Rice Pilaf bụ nri magburu onwe ya ị ga-enwe n’ite nri gị. Ọ na-eme nri otu uto ụtọ, ma ọ bụ ịnwere ike ịme ya ka ọ dị mfe ma jeere ya ozi dị ka nri n'akụkụ! Bipute Ntụtụ
▢⅓ iko yabasị finely gburu
▢abụọ tablespoons bọta
▢1 kloovu galiki mebiri
▢¾ iko basmati osikapa
▢abụọ tablespoons karọt shred
▢abụọ tablespoons ose nkịtị mebiri
▢14 ½ ounce ọkụkọ efere
▢¼ iko mmanya na-acha ọcha ma ọ bụ mmiri
▢abụọ tablespoons almọnd slivered toasiri
▢1 ngaji yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ pasili
ole gburugburu ham ka m chọrọ
Itucha osikapa n'okpuru mmiri oyi na igbapu nke ọma.
Gwakọta yabasị, bọta, galik na ọkara a sauceụ. Esi nri karịrị ọkara nro ka ọ dị nro, ihe dị ka nkeji atọ.
Tinye osikapa ma sie ya ruo mgbe ọ malitere isi ísì wee gbanwee ọlaedo, ihe dịka 7-10 nkeji.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụ ma e wezụga eyịm na-acha akwụkwọ ndụ na almọnd. Weta na obụpde, kpuchie ma belata ọkụ na obere simmer maka minit 15-20 ma ọ bụ ruo mgbe mmiri na-etinye mmiri mmiri.
Wepu ya ma mee ka oche gị kpuchie minit 5.
Fluff na ndụdụ ma jiri almọnd na pasili chọọ ya mma.
Ihe oriri na-edozi ahụ
Calorisị:2. 3. 4,Carbohydrates:32g,Protein:4g,Abụba:8g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:iri na isemg,Sodium:434mg,Potassium:Ogbe 221mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:1590IU,Vitamin C:15.1mg,Calcium:32mg,Iron:0.7mg
(Ihe oriri na-edozi ahụ bụ atụmatụ ma ọ ga-adịgasị iche dabere na usoro esi esi nri na ụdị nke ihe eji eme ihe.)
Isiokwuosikapa pilaf N'ezieSide efere Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Gbanyụọ efere dị mfe a
Isi Ihe Eji Esi Nri
Ngwa ngwa Cooker Turkey Akwukwo nri ofe
Anụ Ahụ Nwere Anụ Ahụ
Apple achịcha ata aru
Potkwụ Chkwụ Ọkụkọ Ngwa Ngwa (nke ọhụrụ ma ọ bụ nke oyi kpọnwụrụ)
Bacon Jalapeño Chiiz Ntụziaka
Blueberry achịcha Ogwe
Mfe Ero Stroganoff
Etu esi esi nri Steak zuru oke